Al-Shabaab oo sheegatay masuuliyada dilka madaxii nabadsugida gobolka Shabeelada Dhexe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaAl-Shabaab oo sheegatay masuuliyada dilka madaxii nabadsugida gobolka Shabeelada Dhexe
June 22, 2016 Abdi Omar Bile Somalia, South-Central 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maleeshiyada al-Shabaab oo ka dagaalanta gudaha Soomaaliya ayaa sheegatay masuuliyada sarkaal sare oo dhanka amaanka ah oo lagu dilay xalay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelada Dhexe.
Cabdiweli Ibraahim ayaa ahaa madaxii nabadsugida ee haayada sirdoonka qaranka (NISA) u qaabilsanaa gobolka Shabeelada Dhexe, waxaana toogtay mid kamid ah ilaaladiisii, sida ay sheegeen ciidamada booliska.
Sida ay ku sheegtay bayaan laga sii daayay idaacada Anadalus oo ay al-Shabaab leedahay maleeshiyada ayaa sheegatay masuuliyada dilkaas in ay iyagu ka dambeeyaan.
Dhanka kale, sida ay qortay warbaahinta dowlada Soomaaliya ciidamada amaanka ee gobolka Shabeelada Dhexe ayaa gacanta ku dhigay ninkii dilka geystay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo Baydhabo tagay
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa shaqadii ka joojiyay agaasimaha haayada socdaalka Maxamed Faarax Ashkir, sida lagu sheegay digree kasoo baxday Madaxweyne ku xigeenka. Digreetada ayaa lagu dhex sheegay in madaxweyne ku xigeenku uu [...]